Uncategorized – စာမျက်နှာ4– JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized (စာမျက်နှာ 4)
Service ကိုယူနစ်လုပ်ငန်းရှင်များ, ဆီ, ဓါတျငှေ့, နှင့်သတ္တုတွင်းယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်နမူနာပြီးတော့တာဝန်တွေကို
ရေတွင်းများအောင်ထံမှအဆီစီးဆင်းမှုတိုးတက်စေရန်သို့မဟုတ်ပင်ဖမ်းမိပိုက်ဖယ်ရှားပစ်ရန် function ကိရိယာများ, အိမ်ရာ, ပစ္စည်းကရိယာ, ရှာဖွေရေးရေတွင်းကနေဒါမှမဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောများ၏စွက်ဖက်မှု. ထို့အပြင်တူးဖော်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများအတွက်နှိုင်းယှဉ်ကုမ္ပဏီများသည် execute စေခြင်းငှါ,. ငါးဖမ်း-အရင်းအမြစ်အထူးကုပါရှိသည်. Career Skills Qualification Seek advice from others to gather information regarding conduit or software styles …
Electrical And Electronic Equipment Assemblers Job Description / တာဝန်တွေများနှင့်တာဝန်များနမူနာ
Assemble or change electric or electrical equipment, including computers, test equipment telemetering techniques, generators that are electrical . Job Skills Requirement Construct power or digital methods or assist structures and mount subassemblies, မော်ဒယ်များ, factors or construction casings, utilizing rivets soldering -welding devices. adjust, ပုံသေတပ်ထား, or replace electric or electric component …
Execute work relating to the expertise of art professions oracouple of servicing to keep perhaps the design of an institution in repair, equipment that is hardware, or models. Duties may involve pipe fitting; boiler making; insulating; ဂဟေ; machining; carpentry; restoring power or mechanical equipment; install လုပ်ပါ, aiming, and managing …
chainsaws employ သို့မဟုတ်ပြိုလဲလမ်းကြောင်းထိန်းချုပ်သစ်ပင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုလျော့ချဖို့တောအုပ်စရိုက်များနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းစနစ်၏အသိပညာကိုအသုံးပြုပြီးချုံကျဆင်းဖို့ပုဆိန်. Career Skills Need Stop saw machines, မျဉ်းစောင်းကနေဘားလျှော့ချဆွဲထုတ်, နှင့်ထင်းရှူးအဖြစ်အလုပ်လုံခြုံရေးမှကြွလာ,. အခြို့သော features တွေအဘို့ချုံအကဲဖြတ်ရန်, including major branch …
Find နှင့်ပို့ခြင်းဖြင့်ရက်ကျော်နေပြီချိန်ခွင်၏ clients များအကြောင်းကြား, တယ်လီဖုန်း, သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကအလည်အပတ်ခရီးပြန်ဆပ်မြှူဆွယ်တောင်းခံရန်. လုပ်ငန်းတာဝန်များ buyeris အကောင့်ငွေပေးချေမှုနှင့်ပို့စ်ငွေပမာဏကိုလက်ခံရရှိပါဝင်သည်; ဖောက်သည်မဖြေပါဘူးဆိုရင်အကြွေးရုံးသို့တောင်းဆိုမှုများပြင်ဆင်နေ; foreclosure ဖြစ်ပွားမှုစတင်သို့မဟုတ်နှင့်စီးရီးများနှင့်ဂုဏ်သတင်း၏မှတ်တမ်းများစာရွက်စာတမ်းများဆက်ပြီး. ရာထူး …
ပစ္စည်းတိကျမော်ဒယ်များ Full-size ကိုအကွာအဝေးနှင့်သစ်သားစည်းဝေး. အခနျးန်ထမ်းများနှင့်သစ်သားမြှူကန်ထရိုက်တာများပါဝင်သည်. Career Skills Prerequisite Examine measurements and contours of designs during hands- စမ်းသပ်ခြင်းထုတ်ကုန်, အပြင်အဆင်အလုပ်သမားနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို. ပန်းချီဆနျးစစျ, အသေးစိတ်အစီအစဉ်, သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ထားကျန်တာတွေ, and consult with designers to ascertain shapes and sizes of …
အထူးပြုကော်ဖီသို့မဟုတ်အပိုဆောင်းဖြည့်အချိုရည် Make သို့မဟုတ်အစေခံ. လူတွေကိုဥပမာအသားညှပ်ပေါင်သို့မဟုတ်မီးဖုတ်ထားသောကုန်ပစ္စည်းများများအတွက် function အစားအစာ. Career Skills Need Make or provide cool or hot products, ထိုကဲ့သို့သော Blend ကော်ဖီအဖြစ်, java အချိုရည်, ကော်ဖီဓါတ် . function ကို tools တွေကိုကင်းစင်သို့မဟုတ်ပိုးမွှားသတ်, သောနေရာများ, သို့မဟုတ် tools များ. ထိုင်လျက်ကင်းစင်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီတည်နေရာ. စစ်ကြော …
ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized 7
Lathe and Turning Machine Tool Setters, အော်ပရေတာ, နု, သတ္တုနှင့်ပလတ်စတစ်ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / Responsibility Template and Tasks Set up , ခှဲစိတျကုသ, or tend lathe and converting devices to experience metal, or show, bore, လိုင်း, kind or plastic resources, including pub investment, or line, လှံတံ. Career Skills Prerequisite Examine …
ဂဟေဆော်လုပ်ငန်း, ခုတ်, ဂဟေဆက်, ထိုအ Brazers ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်ယူမှု Template ပြီးတော့အခန်းကဏ္ဍ
လက်ဂဟေ employ, မီးလျှံဖြတ်တောက်ခြင်း, အဖွင့်ဖြည့်ပါသို့မဟုတ် join သို့မဟုတ်သတ္တုကိုအပိုင်းပိုင်းဂဟေဆော်ရန် brazing tools များ, သို့မဟုတ်လက်ဂဟေ , Indent, လုပ်သတ္တုကုန်စည်သို့မဟုတ်ချုပ်. ယောဘသည်ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်
ရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာများကယောဘဖျေါပွခကျြ / အခန်းကဏ္ဍနှင့် Duty နမူနာ
ရုပ်ရှင်အပေါ်ဓါတ်ပုံတွေကိုရွေ့လျားပြောင်းလဲပါ, ရုပ်ရှင်, သို့မဟုတ်နောက်ထပ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး. ဓါတ်ပုံတွေကိုသုံးပြီးရုပ်ရှင်တေးသံများပြင်ဆင်သို့မဟုတ်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါစေ. Job Skills Prerequisite Minimize shot on sequences at particular items in moments to diverse facets, သငျသညျမှတျစှမျးနိုငျပါ၏အဖြစ်အရည်ချောမွေ့အဖြစ်နိမ့်တစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းထုတ်လုပ်. Revise videos and videotapes to insert …
စာမျက်နှာ4၏ 56« ပဌမ...«23456 » 102030...နောက်ဆုံး »